Apple inotangisa zviri pamutemo macOS High Sierra 10.13.5 yemunhu wese | Ndinobva mac
Apple inosunungura zviri pamutemo macOS High Sierra 10.13.5 yemunhu wese
Mushure meshanu beta beta uye beta 5 ye macOS High Sierra 1, nhasi kambani yeCupertino yangoburitsa yekupedzisira sisitimu yekushandisa yeMac kuti iwanikwe kune vese vashandisi.Muchiitiko ichi, kugadzirisa kwakaitwa mu macOS High Sierra 10.13.6 .10.13.5 inoita kunge isingapfuure gadziriso, kugadzikana kwesisitimu y kutsigira mameseji muICloud.
Tiri kuisa iyi yazvino yepamutemo vhezheni izvozvi pamberi pehurukuro inokosha Muvhuro unotevera uye basa rinoungana nenhau dzekuburitswa kwePodPod mune dzimwe nyika, iyo Shanduro yeIOS yakaburitswa mazuva mashoma apfuura pamwe nemamwe mavhezheni Apple, watchOS uye tvOS anoshanda masystem.
Activate mameseji kubva Zvamada
Kugonesa mameseji muICloud, isu tinofanirwa kuwana kubva kuMessage Zvamunofarira, tinya maAccounts uye sarudza "Activate mameseji muICloud".
Hatina shanduko huru mumaziso mune inotevera vhezheni yeMacOS, asi mamwe acho akakosha senge APFS faira system yekumisikidza pamakomputa ane Fusion Drive disks, kushandisa rutsigiro rwemashoko muICloud kana kuvandudzwa mukuchengetedzwa kwesystem kazhinji.
Chokwadi ndechekuti iyi vhezheni inosvika kungoona nhau dzeiyo inotevera vhezheni ye macOS kuWWDC neMuvhuro, chimwe chinhu icho vazhinji vedu tiri kutarisira asi icho chinoita senge hachizobatanidze hukuru hwekushongedza kana mashandiro ehunhu paMacs. Unogona kuona kana kwete mune yakakosha yatinotaura pane imwe nguva kubvira kusava nechokwadi kwakawanda uye hazvina kujeka kuti ndeipi nzira ichave yekusarudza kubva kuApple. Parizvino ngatifarirei zviripo uye tichaisa vhezheni itsva ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.5 ichangoburitswa neApple kune vese vashandisi veMac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Apple inosunungura zviri pamutemo macOS High Sierra 10.13.5 yemunhu wese
Apple inotanga kugadzira yayo bhatiri manejimendi machipisi
Album nyowani yaKan West inowanikwa paApple Music kubva pakutanga